बद्लिदो मौसममा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्तीहरु - Nepal Sanchar
बद्लिदो मौसममा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्तीहरु
१ चैत्र २०७७, आईतवार ०५:२६
यस मौसममा धेरै परिवर्तनहरू हुन्छन्। यो समयमा बिहान र साँझ चिसो र दिउँसो गर्मी हुन्छ । पूर्ण रुपमा गर्मी नभएसम्म यो मौसममा परिवर्तनहरू हुन्छ ।
यस परिवर्तित मौसममा धेरै सावधान हुनु आवश्यक छ किनकि केही लापरवाहीले तपाईलाई बिरामी पार्न सक्छ।यस मौसममा केके कुरामा ध्यान दिने भन्ने कुराको बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्दैछौँ ।
कपडामा ध्यान दिनुहोस्
बिहान र बेलुका चिसो नभएसम्म आधा बाहुला भएको लुगा नलगाउनुहोस्। गर्मी मौसममा लगाउने कपडा लगाउन मौसम अहिले पूर्ण रुपमा तातो भएको छैन ।बाक्लो लुगा होइन तर पूरा बाउला भएको कपडा लगाउनुहोस् । यसले तपाईंलाई मौसम परिवर्तनको समयमा बिरामी पार्दैन।
खानामा ध्यान दिनुहोस्
जाडो मौसममा तातो खाना पिउनु राम्रो हो जबकि गर्मीमा मानिसहरु चिसो खानेकुरा खान रुचाउँछन् । खानपानमा यी परिवर्तनहरू नगर्नुहोस्।केवल चिसो पानी पिउँदा वा धेरै चिसो चीज खाँदा तपाईंको घाँटी बिग्रन सक्छ वा चिसो लाग्न सक्छ। यस समयमा, भुटेको र भुटेको चीजले पनि नोक्सान गर्न सक्दछ।
एसीबाट टाढै बस्नुहोस्
यस समयमा हिटर वा ब्लोअरको प्रयोग बन्द गरिएको हुनुपर्दछ। हल्का चिसो र तातो मौसमको आनन्द लिनुहोस्। दिउँसो गर्मी भए पनि एसी नचलाउनुहोस् । यसको सट्टा, घरको झ्याल र ढोकाबाट ताजा हावा लिनुहोस्।
घाममा धेरै नहिड्नुहोस्
तपाई दिउँसो चर्को घाममा बाहिर हिड्नुहुन्छ भने बिराी पर्न सक्नुहुन्छ । यस समय मौसम अनुकूल हुँदैन र चर्को घामले ज्वरो आउन सक्छ । यस मौसममा घाममा धेरै नहिड्नुहोस् ।
वृद्ध र बच्चाहरूको ख्याल राख्नुहोस्
यो मौसमले वृद्ध र बच्चाहरूलाई सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्छ। यस समयमा उनीहरुलाई आइसक्रिम, कोल्ड ड्रिंक र दहीबाट टाढा राख्नुहोस्। बिहान र बेलुका तातो कपडा लगाउन दिनुहोस् र धेरै चिसो पानीले नुहाउन नदिनुहोस् ।
सधै स्वस्थ्य रहने ९ तरिका
खाली पेटमा नखानुस् यी खानेकुरा : स्वास्थ्यमा समस्याहरु हुन सक्छ ?
किन झर्छ कपाल ? यी हुन् कपाल झर्ने कारण !